Ciidamada Dowladda oo sameeyay howlgal Miino baaris ah – XAMAR POST
Ciidamada Dowladda oo sameeyay howlgal Miino baaris ah
By Zakariye iiman On Aug 7, 2019
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kadib howlgalkii shalay Ciidamada DANAB kula wareegeen degmada Awdheegle ee gobolkaas.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay in Ciidamda ay ku guuleysteen inay miinooyin dhowr ah ka saareen wadooyinka ka baxa degmada oo ay Al-Shabaab ku aaseen iyo buundada degmadaas.
Sidoo kale isaga oo wareysi siinayay Idaacadda Risaala ee Magalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Miino lagu Aasay wadada aada dhinaca deeganka tooratoorow ay la kacday Gaari ay wateen dad Shacab ah,isla markaana khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ay kasoo gaartay.
La wareegitaanka Ciidamada Dowladda ee degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayuu sheegay inay muhiim u tahay isku socodka deegaano badan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose,isla markaana Bulshada gobolkaasi ay dani ugu jirto.
Waa kuma musharraxa ay wadato dowladda Qadar ee doorashada Jubaland?
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo saaka ka socda Gobolka Shabeellaha Hoose